Ukukhiqizwa kwe-ultrasonic kokukhishwa - i-Hielscher
Isihloko sokusetshenziswa: "Ukukhiqizwa kwe-Ultrasonic kokukhishwa"
Izicucu yizinto, ezikhishwe ezintweni ezingavuthiwe ngenqubo yokukhipha. Ukukhishwa kwe-Ultrasonic (okubuye kukhishwe i-sono-) kuyindlela esebenza kahle kakhulu, esheshayo, ephephile nesebenziseka kalula yokukhipha amakhompiyutha e-botanicals afana namakhambi, imbewu, izithelo, imifino, izimbali, izimpande kanye namagxolo. Ngenqubo yokukhishwa i-solvent iyadingeka. Inzuzo eyodwa yokukhishwa kwe-ultrasonic ukukhethwa okubanzi kwama-solvents ongakhetha kuwo: Isizinda se-Ultrasonic sisebenza nge-sol sol evamile (isib. Ethanol, methanol, heptane, hexane njll.) Kodwa futhi sinobumnene kakhulu, i-sol sol green njengamanzi, uwoyela wemifino, i-glycerine njll. zilungele ukukhishwa kwe-ultrasonic kusuka ezintweni eziningi ezingavuthiwe.
Izithasiselo zitholakala njengama-tincture, ama-undedi noma ifomu le-powder. Izithasiselo zivame ukusetshenziselwa imboni yokudla, i-pharma kanye ne-nutraceutical, lapho izithasiselo zisetshenziswa njengezithasiselo zokunambitheka noma njengezakhi zomzimba ezihambisana nemiphumela yokwelapha noma yokudla.